Mitantana ny risika amin'ny karazan-javamaniry Reef Resilience
Macroalga invasion Graciliaria salicornia kolon-tany maro be ao O'ahu, Hawai'i. Sary © S. Kilarski
A range of karazan-javamaniry dia fantatra fa miteraka risika amin'ny haran-dranomasina, anisan'izany ny alga, trondro ary tsy fahampian-tsakafo. Ny karazam-borona dia sampana izay miparitaka haingana mba handresena ny tontolo voajanahary ary mety hiteraka olana ara-toekarena sy / na tontolo iainana. Maro ireo karazan-karazan-karazan-karazan-javamaniry izay mampitombo ny mety hisian'ny aretina vaovao ary hampihena ny sakafo sy ny habaka ho an'ny karazana teratany. Na izany aza dia tsy voatery avy any an-toeran-kafa ireo mpanafika; Ny karazana teratany dia mety hanjary hitarika azy raha esorina ny fanaraha-maso voajanahary.
Ny karazam-borona dia mety hiteraka fahasimbana mafy sy maharitra eo amin'ny toeram-ponenan'izy ireo amin'ny alalan'ny fampihenana ny habetsahan'ny karazana natiora ary koa ny fanovana ny rafitra sy ny fizotran'ny ecosystem. Ankoatra ny fiantraikany ara-tontolo iainana toy izany, ny karazam-bary dia mety miteraka fahavoazana ara-toekarena amin'ny vondrom-piarahamonina sy indostria eo an-toerana Ireto misy fomba efatra tena ilaina amin'ny fitantanana karazan-javamaniry:
Ny fisorohana no voalohany sy tsara indrindra amin'ny fiarovana amin'ny fitantanana ny karazan'antoka. Mba hisorohana ny fampidirana karazan-karazan-javamaniry dia zava-dehibe ny hahatakatra ny karazan-karazan-karazan-karazan-javamaniry entina, ary izany dia nampidirina. Fomba iombonana amin'ny fampidirana:
Biofouling ny sambo sambo
Famotsorana ireo biby fiompy tsy nirina sy fanjonoana
Famotsorana na mandositra ny efitrano fianarana sy ny laboratoara
Fitaterana amin'ny sambo sy fitaovana fialamboly
Mialà eo amin'ny toeram-pambolena, toeram-pambolena, na zaridaina
Natao tsiambaratelo ho sakafo na loharano fialamboly
Famoahana ny fifehezana biolojika
Any amin'ny faritra na eo amin'ny firenena dia tokony hapetraka ny politika sy ny fitsipi-pifehezana mba hampihenana ny mety hisian'ny fampidirana amin'ny alàlan'ny fomba amam-panao iombonana. Ireo mpitantsoratry ny haran-dranomasina dia afaka miara-miasa amin'ireo masoivoho miasa amin'ny fifehezana ny fihetsik'ireo sambo, manara-maso ny seranan-tsambo na ireo hetsika avo lenta mba hanombanana ny mety sy ny vokatr'ilay fanodikodinam-piaramanidina momba ny haran-dranomasina ary manolotra fanaraha-maso fanampiny momba ny karazana na ny asa atao izay mampidi-doza. Raha miaiky fa ny hetsiky ny sambo dia loharanon-tsarimihetsika amin'ny karazam-biby, dia misy fitsipika marobe sy fomba fanao tsara indrindra azo ampiasaina mba hampihenana ny mety hitranga amin'ny vatohara. Ohatra, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMarine Biofouling and Invasive Species: Guidelines for Prevention and Managementmanokatra fisie PDF dia ahitana ny fomba fitantanana tsara indrindra ho an'ny fiarovana ny fepetra fanodinkodinana dia ampiharina amin'ny sambo, ny fepetra fanaraha-maso eo amin'ny sisin-tany, ny fandaharam-pidiovana, ny fitaovana fanadiovana ary ny fepetra fanadiovana.
Zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny tontolo iainana amin'ny fomba ara-potoana sy ara-teknika mba ahafahana mamantatra ny fampidirana aloha vao haingana ny valiny haingana. Matetika ny fomba tokana hialana amin'ny karazam-pandrosoana iray dia ny mihetsika aloha be loatra amin'ny famoam-panafihana alohan'ny famafazana fanafody. Ny fahitana fahombiazana mialoha sy haingana dia miankina amin'ny fahafaham-potoana afaka manamarina:
Inona no karazana ahiahiana, ary fantatra marina ve izy io?
Aiza no misy azy ary mety hiparitaka ve izy io?
Inona no mety hitranga amin'ilay karazana?
Inona ny asa atao (raha misy)?
Iza no manana fahefana sy loharano ilaina?
Ahoana no hamatsiana ny ezaka?
Ny ezaka fitadiavana vao haingana dia mitaky ny loharanon-kevitra, ny fandrindrana ary ny fandrindrana. Ny karazam-pandehanana dia matetika no hita fa vintana, fa ny olona manana traikefa sy ny mpiasa dia afaka mahita azy ireo amin'ny alalan'ny fanadihadiana karazam-borona manodina ary amin'ny fanaraha-maso ny faritra voafaritra tsara sy avo lenta. Ny tambajotram-panarahamaso iraisampirenena ihany koa dia afaka manome fampahalalana manan-danja momba ny fiovan'ny toetr'andro Ohatra, ny Hawaii misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy maso amin'ny Reef Network dia mitarika ny fiarahamonina amin'ny fanaraha-maso sy ny tatitra momba ny karazan-javamaniry any an-dranomasina, ary ny fitontongan'ny haran-dranomasina hafa toy ny hariva, ny aretina, ary ny fanavakavahana. Io tambajotra io dia ahitana mpiserasera mahazatra (mpampiasa fialamboly, mpitsidika fizahan-tany, mpikaroka, ary mpanararaotra) izay manara-maso sy mitatitra momba ny fepetra momba ny haran-dranomasina. Ny programan'ny valim-panadinana iray dia mety hitarika ezaka mikendry ny hanafoana na hananana karazan-karazan-javamaniry raha mbola misy ny aretina. Tena zava-dehibe ny fanetsehana haingana ny loharanom-pitantanana mba hifehezana ny aretina alohan'ny hidirany bebe kokoa. Ny fahafahana mizara ireo loharanom-pahefana manerana ny jurisdictions, miforona fifanarahana ara-barotra, ary manana fahafahana miditra amin'ny drafitra, vola ary loharanom-pahefana dia singa manan-danja amin'ny Fikolokoloana ny valiny. Ireo fandaharana ireo dia azo atao matetika alohan'ny fampidiran-dresaka iray, izay manamaivana ny valinteny haingana sy mahomby.
Raha vao niorina, dia mety ho sarotra ny manimba ny karazam-pandrosoana, indrindra amin'ny rafi-pifandraisana mifandraika toy ny haran-dranomasina. Na izany aza, ny fiantraikan'ny fiantraikan'ny karazan-javamaniry iray dia mety hanamarina ny ezaka atao mba hifehezana bebe kokoa sy hitantanana ny mponina voavonjy mba hampihenana ny fahasimbana na hamela ireo karazana teratany ho sitrana. Amin 'ny ankapobeny, ny drafitra stratejika dia ampiasaina mba hifehezana ny fipoahana mitaiza.
Ny fahatakarana ny fiantraikan'ny tontolo iainana, ara-toekarena ary ara-tsosialy amin'ny karazana fanodinana dia manan-danja amin'ny alohan'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso sy ny fitantanana. Manana fitaovam-pifandraisana sy fitantanana samihafa ny manampahaizana mba hanomezana tombony ny manam-pahefana hanara-maso, hanangona, ary hanesorana ireo karazam-pandrosoana sy fanapahan-kevitra momba ny fitantanana fitarihana Ireo fitaovana ireo dia ampiharina ao anatinà paikady fandrindrana karazan-tsindrim-peo mikendry sy mikirakira izay manitsy rehefa ilaina.
Ohatra avy amin'ny fandaharanasa fanodinana karazan-javamaniry
Programan'ny liona - Lionfish dia karazan-javamaniry any Atlantika, Golfa any Meksika, ary ny Ranomasina Karaiba. Vetivety izy ireo dia efa miorina, miparitaka manomboka amin'ny fampidirana am-piandohana ao amin'ny Florida Keys. Nandritra ny faritra, ny fandaharanasa dia natsangana tamin'ny fiezahana hanara-maso ny isan'ny mponina mpamono tena mahomby. Ohatra iray amin'izany ny Florida Sanys National Marine Sanctuary, izay miresaka amin'izao fotoana izao misokatra amin'ny varavarankely vaovaoManana fahazoan-dàlana manokana ny lionfisy ho fanangonana ny lefona avy amin'ny Sanctuary Conservation Areas (SPAs), izay raha tsy izany, tsy misy fisaka, tsy misy toerana. Any amin'ny faritra hafa any Karaiba, toy ny Nosy Cayman, ny programa dia mifantoka amin'ny famporisihana ireo mpanjono eo an-toerana hahatratra sy hampiroborobo ny tsenan'ny liona amin'ny alalan'ny fanentanana fanabeazana, anisan'izany ny bokikely manazava ny fomba hiatrehana sy hiomanan'ny lionfish.
Mety ilaina ny famerenana ny tontolo voajanahary raha toa ka tsy vitany ny hisorohana ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'ny karazam-pandrosoana. Ny famerenana amin'ny laoniny dia fanatanjahan-tena sy lafo vidy, noho izany dia tsy tokony hoeritreretina raha tsy efa nihena kely ny taham-pahavitrihana avy amin'ny karazam-piaviana. Na dia misy ohatra vitsivitsy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fanarenana ny fanesorana karazan-karazan-javamaniry iray, dia misy fomba famerenana amin'ny laoniny ho an'ny fanampiana ny fanarenana ny haran-dranomasina taorian'ny fahasimbana. Maro amin'izy ireny no novolavolaina mba hampiasaina taorian'ny fisehoan-javatra mahery vaika, toy ny fananganana lakana. Misy fitarihana feno azo atao fanorenana vatohara izay hahasoa ireo manampahefana mpitrandraka harena eny an-tsaha amin'ny famerenana ny safidy famerenana amin'ny laoniny.
Tetikasa fanesorana alika - Ohatra iray amin'ny fanandramana ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetikasa famerenana amin'ny laoniny ho an'ny Reef Maunalua Bay izay nahatonga ny fanesorana ny vola 3 tapitrisa Avrainvillea amadelpha (hoditra vita amin'ny hoditra), alga iray avy any amin'ny ala vatosokay any Maunalua Bay, any atsimo atsinanan'i O'ahu, Hawai'i. Ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny fiarahamonina irery ihany no nanala ny ala 91,500. Ireo algan'ny alaona mitoka-monina dia nivadika ho fampiasana vokatra ho toy ny jiro amin'ny toeram-pambolena ao an-toerana. Nisy ny Protocol momba ny fanarahamaso ny fiaraha-monina niorina tamin'ny fiaraha-miombon'antoka tamin'ireo mpahay siansa momba ny natiora momba ny natiora mba hanaraha-maso ny sisin'ny 27 izay voavaha. Ity tetikasa ity no dingana lehibe amin'ny famerenana indray ny haran-dranomasina sy ny lakandrano ao Maunalua Bay.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHo any amin'ny toeram-piasana an-dranomasina sy ny fiveloman'olon-tokana azo itokisana: Torolàlana ho an'ny Mpitahiry Coral Corps Karaiba; Toko: Fitantanana ny harena an-kibon'ny tany, Korontana 5: Fahatapahan-jaza sy fitantanana liona
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazana karazana fanavakavahana: fitaovana iray amin'ny fisorohana tsara sy fitantanana fitantanana tsara indrindramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoState of Hawai'i Hawai'i Aquatic Invasive Planning Management Planmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVondrona Fanampiana Espaniola
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Conservation Habitat
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLionfish ao amin'ny bokin'ny Nosy Caymanmanokatra fisie PDF